Bayern Munich oo rigoorayaal ku reebtey Real Madrid final-ka Chelsea wajaheysa+sawiro – SBC
Bayern Munich oo rigoorayaal ku reebtey Real Madrid final-ka Chelsea wajaheysa+sawiro
Bayern Munich ayaa taariikhda markii ugu horeysay 19-ka May 2012 waxay noqotey koox ku lug leh final-ka Champions League-ga oo gurigeeda lagu qabto iyadoo wajahaysa kooxda Chelsea oo ka soo talaabsatey halistii Barcelona.
Bayern waxay ciyaar aad u adag oo la isla gaaray waqti dheeraad ah (extra time) ugu soo baxdey rigoorayaal 3-1 ka dib markii ay iska dayaceen sadex gool ku laad laacibiinta kooxda Real Madrid ee kala Ronaldo & Kaka oo gool ilaaliyaha Bayern Manuel Neur uu ka qabtey kubadii halka Sergio Ramos uu kubadii cirka u diray.
Kulankii xaley ee qaybta ka ahaa lugta labaad ee Semi-finalk-ka oo ka dhacay guriga Real Madrid ee Santiago Bernabeu Real Madrid waxay ka soo kabatey guuldaradii guriga Bayern ee todobaadkii ku soo dhamaatey 2-1 iyadoo laba goo loo mid ahaa gool ku laad uu dhaliyey 15 daqiiqo gudahood ciyaaryahan Ronaldo laakiin wixii intaasi ka dambeeyey Real waxay u muuqanaysay inay daal soo food saarey iyadoo tababare Jose Mourinho uu ku sifeeyey guuldaradii xaley ku dhacdey kooxdiisa oo ay mushkilo ka haysato in 10 ka dhigto 9-ka koob ee ay ka haysato koobkan loo cararayo daal fara badan oo kooxda ka soo gaarey kulankii sabtidii ay la ciyaareen kooxda Barcelone ee horyaalka Spain.
Sidii ay doonto ha ahaateen 120-kii daqiiqo ee ciyaarta loogu tala galay oo ku soo dhamaatey 2-1 isla markaana natiijadan iyo tii hore marka la isku daro ka dhigaysa 3-3 (aggregate) waxaa la isla gaaray rigoorayaasha taasi oo ka dhigaysa in aanay ku xirneyn tababare ama daal iyo caajis ku soo foodsaaro balse nasiibka iyo qibradu ay yihiin waxa lagu kala baxo.
Goolka rajada soo galiyey Bayern ee ciyaarta ka dhigay 2-1 wuxuu ahaa gool ku laad uu u dhaliyey ciyaaryahan Arjen Robben oo horey uga mid ahaan jirey kooxda Real Madrid.
Bayern Munich sadex ka mid ah afartii rigoore ee ay ridatey waxaa u saxiixay David Alaba, Mario Gomez & laadka guusha oo uu dhaliyey Bastian Schweinsteiger, Bayern waxaa laga badbaadiyey rigoorayaasha Toni Kroos & Philip Lehm.
Real Madrid goolka kaliya ee rigoorada ee ay dhalisay waxaa u saxiixay ciyaaryahan Xavi Alonso.
Ganaaxdyada Bayern Munich hareeyey
Bayern Munich si la mid ah kooxda Finalk-ka ay ku balansan yihiin ee Chelsea ciyaartii xaley waxay ka aruursatey kaararka hurdiga (yellow Card) taasi oo ka dhigaysa in sadex ka mid ah ciyaaryahanada lafdhabarka u ah ay ka maqnaan doonaan kulanka Munich, waxaana ugu muhiimsan Gustavo, David Alaba & Holger Badstuber.
Chelsea waxaa ka maqnaan doona John Terry oo kulankii Barcelona kaarka cas ku qaatey qalad ku tala gal ah halka Ramires, Raul Meireles & Branislav Ivanovic oo laba kaar laba ciyaar oo isku xiga qaatey.
Link-ga hoose ka daawo wacdarihii xaley ka dhacay Santiago Bernabeu sports live.
HALKAN RIIX LIVE FOOTBALL